Dagaal dhexmarey haween Soomali qamraysan & kuwa ajanabi(DAAWO VIDEO) – SBC
Dagaal dhexmarey haween Soomali qamraysan & kuwa ajanabi(DAAWO VIDEO)
Posted by editor on January 14, 2012 Comments
Magaalada Leicester ee dalka Ingiriiska ayaa waxaa dhawaan maxkamad la soo taagey sadex hablood oo Soomaali ah oo lagu eedeeyey in iyagoo qamreysan ay si xun u garaaceen haween Ingiriis ah oo ay murmeen xili saq dhexe ay marayeen bartamaha magaalada.
Gabdhaha Soomaalida oo magacooda lagu sheegay Cambaro Maxamed oo 24 sano jir ah, Ayan Maxamed 28 ahna ardey, Hibo Maxamed, oo 24 sano jir oo isla dhashay iyo Ifraax Nuur oo 28 sano jir ah oo ay walalao yihiin ayaa lagu eedeeyey inay si xun u jirdileen oo ay ku goobteen Rhea Page oo 22 sano jir ah, taasi oo mudo la jiiftey gacan qaadkii ay u gaysteen gabadhahaasi iyadoo ku wayday shaqadoodii.
Maxkamad la soo taagey hablahan Soomaalida ah ayaa lagu soo bandhigay muuqaal video ah oo ay duubtey caamirooyinka Booliiska ee wadooyinka ku xiran ee loo yaqaan CCTV, waxaana laga daawadayay hablaha Soomaalida oo si xun u jirdilaya haweenaydaasi iyadoo sidoo kale nin la socdey gabadhaasi oo la sheegay inay saaxiibo ahaayeen oo isku dayay inay ku difaaco gabadha weerarka haweenku ku soo qaadeen.
Robert Brown oo ah qaadiga maxkamada ayaa meesha ka saarey eedeynta hablaha Soomaalida loo soo jeediyey ee ku aadan in ay sarqaansanaayeen wuxuuna soo daliishaday diinta ay haystaan ee Muslimka oo uu sheegay inay xaaran tahay in qofka Muslimka ah uu cabo qamri, balse wuxuu ku soo rogay xukuno kala duwan haweenkaasi oo ay ka mid tahay saacado shaqo arimaha bulshada ah oo aan wax lacag ah la siinayn, bandow habeenkii aanay u bixi karin magaalada & ganaaxyo kale.
Dhacdan ayaa mudooyinkii ugu damabeeyey waxaa si weyn u hadal hayey saxaafada dalka Ingiriiska iyadoo jaraa’idka lagu soo bandhigay sawirada gabdhaha Soomaalida ee lagu eedeeyey falkan.
Si u daawado dagaalkan oo qosol iyo yaab badan riix link-ga VIDEO-ga hoose Halkan riix.